Umhlahlandlela wezokuvakasha kwi-Dubai Budget Friendly - Vakashela i-UAE!
Umhlahlandlela wezokuvakasha kwi-Dubai Budget Friendly
Ama-Gems kanye neJowelry Industries e-Dubai
Kwangathi 15, 2019
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Kwangathi 14, 2019
Igayidi yezivakashi eziya ku-Budget Friendly Dubai, Lapho ungakaze ungene kulokhu Ilanga ledolobha laseDubai e2020. Kepha funa ukuzwa ubumnandi bomuzi ngaphandle kokumba umgodi emaphaketheni akho, ngakho-ke akumele weqe lezi zimali ezihambisana nobhajethi kanye kanye. ngesipiliyoni sempilo yonke.
I-Dubai inokuningi futhi kuningi ongakunikela noma ngabe uphakeme yini ekuzijabuliseni, noma isixhumi sokudla, amawayini, noma umthandi womculo nemvelo, noma nje funa ukuthatha izingane zakho ngolwazi oluthile lwempilo ngokuphepha okukhulu nenhlanzeko. Vele fisa okuthile & idolobha linayo kuwe!
Abangu-10 abaphezulu kakhulu kufanele bahambele / ukusikisela okuhlangenwe nakho kukhona lapha:
I-1. I-Desert Safari ne-Dune Bashing
Lapha uthola indlela yendabuko yama-Arabhu yokugubha izihlabathi zegolide… kukhona ukugibela amakamela, ukugibela okusheshayo eLand Cruiser ezindundwini zesihlabathi, isipiliyoni ngesitayela sesi-Arabhu Ama-Majlis ngomdanso obukhoma wesisu, ama-henna tattoos ama-Arabhu, iseshini lesithombe ezikhaleni zama-Arabhu ubucwebe, umdanso womlilo & imibukiso yokudansa yama-tanoura. Okunye ukunikezwa kufaka ne-sanding boarding (noma ungaletha eyakho), ukuhamba ngebhilidi njll.
Gqoka izingubo eziphathekayo, gcina i-set of light elula kakhulu
Gqoka izicathulo ezivulekile
Yenza izinwele zakho zihlangane
Yenza nge-SPF ephezulu kanye ne-pair shades enhle
Thatha ibhodlela lamanzi okwanele & ukudla okulula njengokungathi buffet iqala kusihlwa.
I-COST: Amanani amathikithi ahluka kusuka ku-AED 70 ngomuntu ngamunye kuya ku-AED 250 ngomuntu ngamunye kuye ngokuthi inkampani yokuvakasha uyibhala iphakheji yakho.
Thola kabanzi mayelana I-Visa eya eDubai.
I-2. Vakashela i-Majestic Burj Khalifa, umthombo wase-Dubai ne-Dubai Mall
Cabanga nge-Dubai futhi ungeke uphuthelwe ukucabanga ngalezi. Okude kakhulu, amahle kakhulu & ngobukhulu emhlabeni.
Uma wesaba ukuphakama futhi ufuna ukuqhubeka nokubabaza ubuhle balesi simanga sobunjiniyela, ungavakashela iDubai Mall & bukela imithombo kanye ne-laser light kukhanya kwiBurj Khalifa, kuyilapho umbukiso womthombo womculo uhlangana njalo ngesigamu sehora, isibuko se-laser esakhiweni eside kunazo zonke sinesheduli, hlola ikhasi labo lemithombo yezokuxhumana ngaphambi kwesikhathi ubanikeze ukuzama.
Bhuka amathikithi akho phambili uma ufuna ukuvakasha kweBurj Khalifa.
Vakashela ngezikhathi zantambama ukuze ungaphuthelwa ukukhanyisa.
Gqoka izicathulo ezikhululekile, kukhona inketho yosizo lwesihlalo esinamasondo.
I-COST: Iningi likhululekile
Uma ufuna ngempela ukwazi kuzwakala kanjani ukuba ku phezulu komhlaba, ngokoqobo, ke ungaphuthelwa ukuvakashela e-Top of Burj Khalifa.
Amaphakheji aqala kusuka ku-AED 150 ngomuntu ngamunye nangaphezulu, iwebhusayithi yabo ngokwayo inezinqwaba eziningi ze-combo.
I-3. I-Global Village
Cabanga a indawo lapho amagugu omhlaba ahlangana khona, indawo lapho ungavakashela khona lapho okufunwa kakhulu khona izakhiwo namatshe ezikhumbuzo zamazwe ambalwa, ungafakaza imisebenzi yawo yendabuko yobuciko, ukudla nobungcweti ongaziqhayisa ngakho emndenini wakho nakubangane. Ukuvakashela ama-pavillion alezi zizwe uthola ukwazi okuningi, ukuthi noma ngabe uziqhayisa ngokuhambela lawa mazwe uqobo, abantu bangawela.
Kulapho, banezinkumbulo, izinongo, izingubo zendabuko, ukudla, izesekeli nokuthi yini engekho. Qhubeka ngalokhu okungenakulibaleka uhambo lwamasiko kanye e Dubai.
Indawo enkulu futhi idinga ubuncane bamahora angu-4.
Ivula i-4 PM kuze kube yi-12 phakathi kwamabili phakathi nosuku (ngo-Oktoba-Ephreli) futhi iqhutshwe ngamahora amaningi edlule nemigwaqo igaxekile, ngakho-ke cwangcisa ngokufanele.
Ungathola usizo lwabakhubazekile kanye nokungena mahhala kwabakhulile.
Phatha amanzi anele & ukudla okulula (uma uncane izingane), yize iyatholakala ngaphakathi
Gqoka izicathulo eziphathekayo futhi uthwale ama-sweatshirts
I-COST: 15 AED ngomuntu ngamunye, izingane ezingaphansi kwe-3 nezakhamuzi eziphakeme zihamba mahhala
I-4. Thola i-Bedazzled e-Gold & Spice Souks, i-Al Seef Village, i-Old Dubai & DHOW
Vakashela Bur Dubai futhi UDeira, uzothola umuzwa wezikhathi ezindala & umuzwa omncane wezimakethe zase-Indian Open ikakhulukazi endaweni Meenabazar. Lapha uzothola izinhlobonhlobo zezinongo ezinye ongazitholi njalo njenge-I-Zatar“. Igolide lithengisiwe ku UAE ingenye enhle kakhulu, uma ungumNdiya, kumele wazi ukuthi ingakanani le nsimbi eyigugu enayo ezimpilweni zethu ... noma kunjalo, lapha uzothola imiklamo ongakaze uyibone ngaphambili.
Vakashela emahoreni ase-Abara, kumnandi ukuhamba ngaphakathi kwedolobha ukubukela i-old and new worlds e-Dubai ukuhlala ndawonye.
Emzaneni we-Alf, izindawo zokudlela zenzelwe njengeziqashiso zesitayela sase-Old Arabic Village futhi le ndawo imnandi kakhulu, kodwa izokhumbuza enye ye-Khau Gully yase Delhi ...
I-COST: I-Dhow cruise iqala kusukela ku-AED 70 kuya phambili, kuye ngokuthi yiyiphi oyikhethayo. Ungakwazi ukuzulazula Abara Izikebhe (AED 1 kuphela) noma uthathe itekisi yamanzi (AED 20) noma ukuhamba kwamanzi ngesikebhe kusuka ku-Marina (AED 50). Umbono uyamangalisa.
I-5. I-Atlantis the Palm, isiqhingi sasePalm Jumeirah
Kuyinto futhi isimanga sobunjiniyela kanye neziqhingi ezinkulu ezakhiwe ngabantu. Lawa makhaya esidleke abanye osaziwayo abadumile emhlabeni. Ihhotela i-Atlantis lihhotela elilodwa elihle ukuvakasha, kwepaki yalo lamanzi, amakamelo alahlekile njll.
Ukuze uthole ukubukeka okuhle kwesimo sesundu (i-AED 20 yamathikithi wokubuya ngomuntu ngamunye), shayela kumamorails, ngaphandle kwalokho ungagibela itekisi, ikakhulukazi uma uyiqembu elikhulu labantu futhi ungafuni ukusebenzisa imali eningi.
Izindleko: Kuncike esikhathini sokubhuka
Lokhu izingadi zomhlaba omkhulu kunabo bonke futhi enhle kunazo zonke, umuntu akakwazi ukucabanga ukuthi izitshalo eziningi kangaka zigcinwe kahle enhliziyweni yezwe elibizwa ngokuthi eyomile, minyaka yonke ziba nomhlobiso okhethekile & nesiqophamlando sethando, uthando, izindiza, unyaka weMickey njll.
I-COST: AED 50per umuntu, izingane ezingaphezu kwe-12 iminyaka 40 AED.
I-7. I-Jumeirah Beach Corniche
Uhambo lwakho aluphelele ngaphandle kwesithombe I-Burj Al Arab ngemuva. Banoba nesihlabathi esikhulu, isihlabathi esihlanzekile, ama-shacks, ukudla okudliwayo ngaphandle, ukuhamba nokuhamba ngamabhayisikili, izindawo zokungcebeleka ezinhle nalokho okungekho.
I-8. CABANGA ukuboniswa eMnyangweni WeMidolobha
I-laser enkulu kunazo zonke emhlabeni, i-Guniess Book Record ewina i-laser ekubonisweni kwamanzi. Ngemithombo ye-30 nomsindo ozungeze ukuxhuma nezithameli, IMAGINE ungumbukiso ongakaze ubonwe ngaphambili. Kuyinto HUGE!.
Mahhala mahhala. Umbukiso uqala ku-6.30 PM ngezikhathi zehora kuze kube yi-10.30 PM
I-9. I-Dubai Frame
Futhi futhi, uhlaka olukhulu kunawo wonke emhlabeni, indawo eyakhiwe kahle. Umbhoshongo owodwa we okukhombisa okwedlule kweDubai kanti enye ineqiniso langempela wena, le ndawo inhle ngaphakathi. Kufanele uvakashele kanye.
I-ACE: AED 50 kubantu abadala, kunamanye amadlule emndenini, kuyilapho izingane ngaphansi kwe-5 zihamba mahhala.
I-10. Dubai Glow Garden
Le yindawo okufanele ivakashelwe ngemuva kokushona kwelanga, indawo ongayivakashela kanye nezingane kwenza kube mnandi ngokwengeziwe. Lokhu kufaka ipaki yeDinosaur, ipaki yokusimamisa ne-Ice park (inethikithi elihlukile), kepha isipiliyoni esigcwaliswa ubumnandi kubo bonke.
Ivula ngo-Okthoba futhi ihlala ivulekile kuze kube sekupheleni kukaMeyi, ibiza i-AED 65 (izingane ezingaphansi kwe-3 zihamba mahhala).
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka okuhle iziqondiso Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nokuqashwa e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.